မေလ-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့-2018 အပေါ်အားဖြင့် admin
မေလ 12 နှင့် 14 တွင်မှော်အစားအစာကားတစ်စီး၏တစ်ခုလုံးကိုအဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအောင်မြင်စွာ 2019 နှစ်ပတ်လည်မဟာဗျူဟာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ "အနာဂတျမှာအမှေဥစ်နှင့်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှု, ထိရောက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှု" သည် ဖြစ်. , 2019 နဲ့ p အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်သည် ...
အစားအသောက်လည်းတစ်ခုခုလုပ်တစ်ခုသံလွင်ခက်ပစ် 11 နိုင်ငံအရှိဆုံးသော authoritative အစားအစာအသင်းအဖွဲ့အတူတကွဆောင်တတ်၏,
ဒီဇင်ဘာ 8 ရက်နေ့တွင်တရုတ် (Shaxian) မုန့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်သည်၎င်း၏ 20 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုလိုက်ခြင်းသည်။ အစားအစာ Sha ကောင်တီ၌၎င်း, 100 ကိုနိုင်ငံတကာနှင့် loca ကျော်အတူတူယူဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိပြင်သစ်, ဘရာဇီး, အိန္ဒိယ, နှင့်အခြား 11 နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတဝှန်းကနေ 11 နိုင်ငံစုစုပေါင်းရှိပါတယ် ...
မှော်စားနပ်ရိက္ခာကားတစ်စီးနိုင်ငံခြားရေး Market က R & D ဦးစီးဌာနတည်ထောင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်များမြင့်တက်မှုနှင့်အတူမိုဘိုင်းထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ မိုဘိုင်းထမင်းစားခန်းကားသစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းမှာမှော်အစားအစာကားတစ်စီးရှည်လျားသောတရုတ်လူမျိုးကိုလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဝင်သောအစောဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ...
နက်ရှိုင်းသောဆိုင်ကားတစ်စီးလယ်သို့သွားကုမ္ပဏီ၏ဒူဘိုင်းထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းဖြစ်ပြီးယခုအခါကုမ္ပဏီပေါင်း 100 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိခဲ့သည်!
မှော်အစားအစာကားတစ်စီးကားတစ်စီးထမင်းစားခန်းကားတစ်စီး၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အမြစ်ကို ယူ. , ဒူဘိုင်းကနေဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုလှုံ့ဆော်မှု, ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ကိုရရှိခဲ့သည်။ လုပ်ကားကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးလှပသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနေသူများကဖန်တီးသောကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်မြင့်မား custo ကချီးကျူးခဲ့သည် ...
အားလုံးဒါဟာနောက်ဆုံးတော့လာမယ့်ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွမ်ကျိုးနိုင်ငံတကာစားနပ်ရိက္ခာပွဲတော်မှတစ်ကြိမ်အလည်အပတ်! ! ! ဒီအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာ, ကောင်းကင်ဘုံလက်လွတ်ဖောင်းနိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အကြီးတန်းအစားအစာအဖြစ်? ပိုများသောမျှော်လင့်မထားတဲ့ဒါဟာဒူဘိုင်း (စားနပ်ရိက္ခာ Truck ကား) ၏လမ်းမများပေါ်တွင်အစားအစာကုန်တင်ကားတောင်မှကွမ်ကျိုး International ၌ထငျရှားပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် ...